मालिकाको दृश्यले सबै चकित, महिलाले छुन नपाउने पशुपतिको आरती कसरी रेखाको हातमा ? – Pahilo Page
मालिकाको दृश्यले सबै चकित, महिलाले छुन नपाउने पशुपतिको आरती कसरी रेखाको हातमा ?
१४ आश्विन २०७५, आईतवार ११:४५ 1523 पटक हेरिएको
काठमाडौं, १४ असोज । भर्खरै रिलिज भएको चलचित्र मालिकाको ट्रेलरको एउटा दृश्यले सबैलाई चकित बनाएको छ । विशेषतः महिलाहरुलाई यसमा रहेको एउटा दृश्यले आश्चर्यचकित पारेको छ ।
नारी शब्द नै यति धेरै सम्मानित र प्यारो छ कि यसको गरिमा र ओज नै भनिसाध्य छैन । नारीले नै जन्म दिएका पुरुषहरु नारीकै काखमा खेलेर नारीबाटै पाएको ज्ञानले आफूलाई परिमार्जित र सुसंस्कृत गरेका हुन्छन् । विडम्बना ! यही समाज जहाँ नारीमाथि नै हिंसा भइरहेका छन् । अधिकारको सवालमा पनि हरेक ठाउँमा विभेदको शिकार नारी नै हुनु परेको छ ।
अधिकारमा विभेदमात्रै होइन हरेक ठाउँमा अपहेलना र कुसंस्कारको भारी पनि तिनै नारीको भागमा । तिनै नारी बारम्बार बलात्कृत हुन्छिन् पुरुषबाट र आवाजहीन बनेर ताडना सहन वाध्य छन् र केहीले आवाज उठाए पनि न्याय नपाएर थाकिसकेका हुन्छन्, गलिसकेका हुन्छन् र न्यायका लागि विद्रोह गर्न सक्दैनन् ।
यस्तैमा महिला हिंसा तथा बालविवाह विरुद्धको अभियानमा खरो उत्रिएकी चर्चित नायिका रेखा थापा निर्देशित चलचित्र मालिकाको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो समय नारी सचेतना र नारी सशक्तिकरणका लागि योगदान दिने हेतुले नारीप्रधान चलचित्रहरु बनाइरहेकी र नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अलग छाप छोड्न सफल रेखाले मालिकालाई बालविवाह विरुद्ध उभ्याएकी छन् ।
आगामी कार्तिक १६ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र “मालिका” यो बेला युटुबदेखि सबैतिर चर्चामा छ । मालिकाको ट्रेलरमा हरेक पाटो महत्वपूर्ण देखिएका छन् । यद्यपि त्यसमा रहेको एउटा दृश्यमा भने दर्शक÷स्रोताको खासै ध्यान जान सकेको छैन ।
चलचित्रको ट्रेलरमा एउटा महत्वपूर्ण दृश्य देख्दा महिलाहरु भने चकित छन् । पशुपतिनाथको मन्दिरमा गएर आरती गरिएको दृश्यले महिलाहरु चकित परेका हुन् । पशुपतिनाथको मन्दिरमा महिलालाई आरती छुन दिइँदैन । कसरी सम्भव भयो एउटा महिलाले पशुपतिनाथमा आरती गर्न ? पुरुष पुजारीबाहेक अरु कसैले छुन नपाउने ठाउँमा चलचित्रमा भने रेखाले उक्त आरती गरेको देखिएको छ ।
उक्त दृश्य चलचित्रभित्र समेट्नु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण देखिएको छ । इतिहासमै पहिलोपटक पशुपतिनाथको आरती समातेर रेखाले महिलाले शक्ति हातमा लिएको संकेत गरेकी हुनसक्छ । तर प्रश्न के हो भने आरती उनले समातिन् कसरी ?
उक्त दृश्य एकपटक नियालेर हेर्नुहोला